EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၃)
ကျူးကျော်စစ်ပုံစံ တိုက်ခိုက်မှု အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန်
ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရှ် ဘလော့ဂါ အသတ်ခံရမှု မသင်္ကာသူကို ဖမ်းဆီး
ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်အဖွဲ့က ၁၅ ဦး ဖမ်းဆီးမိ
တိကရစ်မြို့ကို ပြန်သိမ်းဖို့ အီရတ် စစ်ဆင်ရေး စတင်
ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုး ပြန်လည်လွတ်မြောက်
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို ရဲအင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ၀ိုင်းထား
သပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းသူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တားဆီး
လွိုင်ကော်မြို့တွင် အမျိုးသားတဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
ရှစ်နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူကို မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ရဲတွင် အမှုဖွင့်
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို ရဲအင်အားထောင်ချီ ပိတ်ဆို့ဝိုင်းပြီ
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ကာလအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ အောင်မလုပ်ဖို့ ဒေါ်စုသတိပေး
ပညာ​ရေး သပိတ် ချီ​တက်​မှု ပြန်စမယ်
မသန်စွမ်းဖြစ်သူ ကားတက်မောင်း၍ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်
ဆီရာလီယွန်း ဒုတိယသမ္မတ အီဘိုလာရောဂါမကူးစက်ရေး သီးသန့်ခွဲနေ
လောက်ကိုင်မြို့က ဒေသ ခံတွေ ပြန်လာကြဖို့ အာဏာပိုင် က ခေါ်ယူ
တံတားမြို့တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံး
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့ ထုတ် သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄)
Posted: 02 Mar 2015 07:30 AM PST
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ အစိုးရတပ်မတော်က တိုက်လေယာဉ်တွေ၊ တင့်ကားတွေနဲ့ သံချပ်ကာကားတွေအသုံးပြုပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို ပြည်ပကျူးကျော်စစ်ပုံစံနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ပူးတွဲသဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးထွန်းမြတ်လင်းက နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေေ
Posted: 02 Mar 2015 06:26 AM PST
Farabi Rahman ဆိုသူဟာ အရင်ကလည်း တခြား ဘလော့ဂါ တွေကို ခြိမ်းခြောက် ခဲ့မှုနဲ့ အဖမ်းခံခဲ့ရဖူး။ ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရှ် နွယ်ဖွား အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဘာသာမဲ့ ဘလော့ဂါ Avijit Roy ဒါကာမြို့မှာ အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူသည်းတဲ့ ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ကို ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရှ် ရဲတွေက ဖမ်းဆီး လိုက်ပါတယ်။ Farabi Rahman ဆိုတဲ့ အဲဒီ ဘလော့ဂါဟာ အသတ်ခံရသူ မစ္စတာ ရွိုင်းကို လူမှုကွန်ရက် ဝက်ဘ်ဆိုက် ကနေ တစ်ဆင့် အသက် အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှု ချီတက်မယ့်ကျောင်းသားတွေ ပိတ်ဆို့ခံရ
Posted: 02 Mar 2015 06:05 AM PST
(ဓာတ်ပုံ - ကိုစည်သူ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက်) အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက် သပိတ်မှောက်နေတဲ့ ကျောင်သားတွေ ပြန်လည် စတင်ချီတက်တဲ့နေမှာပဲ အာဏာပို်င်တွေက ပိတ်ဆို့ ဟန့်တားထားပါတယ်။ လက်ပံတန်းမြို့ အောင်မြေဗိမာန် ဘုန်းကြီးကျောင်း အပြင်ဘက်ကို မထွက်နိုင်အောင် ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် လက်ပံတန်းမြို့ အ၀င်အထွက် လမ်းတွေကိုလည်း ပိတ်ဆို့ထာြး
Posted: 02 Mar 2015 05:58 AM PST
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ဒေသထဲမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ဦးဖုန်းကြား ရှင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမ်အဲန်ဒီအေအေ ကိုးကန့် တိမ်းရှောင်အဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ အပြင်းအထန် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေဟာ လောက်ကိုင်နဲ့ ကုန်းကြမ်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မတ်လ ၁ ရက် မနက်ပိုင်းကစပြီး လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ရာမှာ ကိုးကန့်တိမ်းရှောင်အဖွဲ့ ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
Posted: 02 Mar 2015 05:57 AM PST
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ပြင်းထန်နေပြီး မနေ့ညပိုင်းက လောက်ကိုင်မြို့တွင်းမှာ မီးလောင်မှု ၂ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ လောလောဆယ်မှာ အစိုးရတပ်ဘက်က တပ်အင်အားတွေ ထပ်မံ ပို့ဆောင်နေပြီး တိုက်ပွဲအရှိန်ဟာ ပိုမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်နေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည် အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တ
Posted: 02 Mar 2015 05:54 AM PST
စစ်ဆင်ရေးမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ သောင်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆို အီရတ် နိုင်ငံမှာ မြောက်ပိုင်း ဆလာဟက်ဒင် ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်တဲ့ တိကရစ် မြို့ကို IS အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံအဖွဲ့ရဲ့ လက်ထဲကနေ ပြန်လည် သိမ်းယူဖို့ အီရတ် အစိုးရက စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုကို စတင် လိုက်ပါတယ်။ ဒီ စစ်ဆင်ရေးမှာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ဆွန်နီ တပ်သား ၂၀ဝ၀ ခန့်၊ ရှီအာ မွတ်ဆလင်တွေ၊ ကာ့ဒ် ပြောက်ကျားတွေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ သောင်း နီးပါး ပါဝင်ပြီးေ
Posted: 02 Mar 2015 04:15 AM PST
ဓာတ်ပုံ – ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မုံရွာမြို့က နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အလွတ်တန်း ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုးကို မုံရွာရဲစခန်းက ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ “သူတို့ ဟိုခေါ်ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ ခေါ်ဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲ သုံးနှုန်းတာ ပိုကောင်းပါတယ်”လို့ ပြန်လွတ်လာသူ ကိုအောင်နေမျုိုးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို ရဲအင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ၀ိုင်းထား
လက်ပံတန်းမြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ သပိတ်ကျောင်းသားတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ လုံခြုံရေးအင်အား ရာချီပိတ်ဆို့နေသလို ကျောင်းသားတွေဟာ ရန်ကုန်ကို ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ ညှိနှိုင်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပဲခူးတိုင်း နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး သက်ထွန်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်ကို ဆက်လက်မချီ တက်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အခုညနေပို
Posted: 02 Mar 2015 03:43 AM PST
Photo: Kyaw Zaw Win/RFA လက်ပံတန်းမြို့မှာရှိတဲ့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေထံ လာရောက်ပူးပေါင်းကြမယ့် ပြည်၊ မင်းလှ၊ နတ်တလင်းဘက်က ကျောင်းသားတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက မင်းလှမြို့မှာ တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ တချို့က လက်ပံတန်းကို ရောက်ရှိလာပြီး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ ပူးပေါင်းကြပါတယ်။ လက်ပံတန်းက သပိတ်စစ်ကြောင်းရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အဝင်လမ်းကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က တားဆီးထားပါတယ်။ RFA Burmese လွိုင်ကော်မြို့တွင် အမျိုးသားတဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
Posted: 01 Mar 2015 09:20 PM PST
ဖေဖော်ဝါရီ (၂၆) . မွန်းလွဲ (၂)ရီခန့် လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါတမရပ်ကွက် အိမ်အမှတ် ဒေါ - ၁၇၁ တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကြိုးဆွဲ ချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ သိရပါသည်။ ကြိုးဆွဲချသေဆုံးသူမှာ အသက် ၂၉ နှစ်ရှိ ချမ်းမြင့်နိုင် ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း အမြင့် (၇) ပေခန့်ရှိ နေအိမ်ထုပ်တန်းအိမ်တွင်းတွင် ကြိုးဆွဲချသေနေခြင်းဖြစ်သည်။ . ၄င်းသေဆုံးသူသည် သေဆုံးမှုအား ဓမ္မတာအတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ေ
Posted: 01 Mar 2015 08:51 PM PST
ရန်ကုန်ကိုချီတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ သပိတ်ကျောင်းသားတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီမနက်ပိုင်း က လက်ပံတန်းမြို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပိတ်ဆို့ တားဆီးပြီးနောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပဲခူးတိုင်း နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး သက်ထွန်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ကျောင်းသားသပိတ်ရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုရဲရင့်ကျော်က “ကျနော်တို့ကို တားထားပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို နယ်လုံဝန်ကြီးက ရှစ်နှစ်အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသူကို မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ရဲတွင် အမှုဖွင့်
Posted: 01 Mar 2015 08:23 PM PST
သံတွဲ၊ မတ်လ ၂ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့နယ်တွင် အသက် ရှစ်နှစ်အရွယ် ပထမတန်း ကျောင်းသူ တစ်ဦးအား မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြင့် အဒေါ်ဖြစ်သူက အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးအား ရဲစခန်းတွင် မတ်လ ၁ ရက်နေ့က အမှုဖွင့် တိုင်ကြားလိုက်သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းအမှုအား သံတွဲမြို့နယ် ဂျိတ္တောနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ အမှုအမှတ် (ပ)၁၈/၂၀၁၅၊ ပြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁ အရ အမှုဖွင့်ကာ ဒုရဲအုပ် စိန်မင်းသန်းမှ လက်ခံစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေကြော
Posted: 01 Mar 2015 07:54 PM PST
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု ပိုများလာပြီး၊ ကွမ်းစားတဲ့ အလေ့အထအပြင်၊ ခံတွင်း ရှနာမှုတွေကြောင့် အဓိက ဖြစ်ရတာလို့ ခံတွင်း အထူးကုတွေက သတိပေး ပြောဆိုကြပါတယ်။ ခံတွင်းကင်ဆာ မဖြစ်ရအောင် ကွမ်းစားတာ လုံးဝ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီး၊ ခံတွင်းရှနာတွေ မဖြစ်အောင်၊ ပိုးစားလို့ ဖြစ်လာတဲ့ သွားအငုတ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့၊ မကောင်းတဲ့ သွားတွေကို အစားထိုးကုသဖို့နဲ့ ကင်ဆာမတိုင်ခင်ဖြစ်တဲ့ ကနဦး အနာတွေကို ကုသပေး
Posted: 01 Mar 2015 07:00 PM PST
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေ ပဲခူးတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း နယ်စပ် မီးနင်းချောင်း တံတားကို ဖြတ်ကျော်ချီတက် လာခဲ့မယ် ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး ရေအမြောက်ကားကို အသုံးပြုလူစုခွဲသွားမယ်လို့ ရဲတပ်ရင်း ၈ တပ်ရင်းမှူးက ဒီဗွီဘီကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရဲတပ်ရင်း ၈ တပ်ရင်းမှူး ဒုရဲမှူးကြီးသန့်စင်ဦးက “ဒါဆူပူမှု သပိတ်စစ်ကြောင်း ၀င်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မပြုစေေ
Posted: 01 Mar 2015 07:01 PM PST
ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းက ကျောင်းသားတွေ ဒီနေ့မနက် စတင်ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ လက်ပံတန်း အောင်မြင်ဗိမာန် ကျောင်းတိုက် ကို ရဲကား ၇စီး ရေကား၂စီးနဲ့ အခုလက်ရှိ ပိတ်ဆုို့ ဝိုင်းရံထား လိုက်ပါပြီ။ (မနက် ၈း၄၅ နာရီ) ကျောင်းသားတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲကနေ သပိတ်မှောက်ပြင်ဆင်နေပြီး ကျောင်းရှေ့ကနေ ဆယ်မိနစ်အတွင်း ဖယ်ပေးဖို့ရဲတွေကို အချိန်ပေးထားပါတယ်။ မနက် ၉ နာရီထိုးခါနီးလောက်မှာတော့ ရဲမေတွေ
Posted: 01 Mar 2015 06:00 PM PST
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရာပြည့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်ပွဲနဲ့ တက်ရောက်သူ ပရိသတ် (ဓာတ်ပုံ- မင်းမြန်မာ fb) NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေက သူ့ရဲ့ လူထု စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွေမှာ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကို တည်ဆောက်နေတဲ့ ကာလအတွင်း အတိတ်က အဖြစ်ဆိုးတွေကို ပြန်လှန်ပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် မလုပ်ကြဖို့ သတိပေး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း သမ္မတ ဦးသိ
Posted: 01 Mar 2015 05:50 PM PST
ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသူ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးဝေစဉ်။ တရုတ် မြန်မာနယ်စပ်နားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အတွက် တရုတ်ရဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြား လုံခြုံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပြီး ဒီပြဿနာတွေ အတွက် ၂ နိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူတွေကြား အနီးကပ်ဆက်ဆံ ဖြေရှင်းနေတယ်လို့ တရုတ်ထိပ်တန်း သံတမန်တယောက်က ပြောကြားလိုက်ပါ
Posted: 01 Mar 2015 03:21 PM PST
ရန်ကုန်တိုင်း အဝင်မှာ သပိတ်ကို ဟန့်တားဖို့ အစိုးရက လုံခြုံရေး အပြည့် ချထားကြောင်း ကျောင်းသားတွေက ပြော။ လက်ပံတန်း မှာ ရပ်နား နေတဲ့ ဒီမို ကရေစီ ပညာရေး သပိတ် စစ်ကြောင်း ဟာ ဒီနေ့ မှာ ဆက်လက် ချီတက် မှာ ဖြစ်တယ် လို့ သပိတ် ဦးဆောင် ကော်မတီ က ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။ မတ်လ ၁ ရက် နေ့ မှာ ချီတက်မှု ပြန်လည် စတင်မယ် ဆိုပြီး ပြောထား ပေမယ့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေဟာ ရန်ကုန် မှာ သံဃာ အင်အားစု တွေ ၊ နိုင်ငံရေး အင်
Posted: 01 Mar 2015 03:05 PM PST
ရန်ကုန် မတ် ၁ ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် အမှတ် ( ၉၂) ရပ်ကွက်တွင် အရှိန်မြှင့်မောင်းနှင်လာသည့် ဗစ်တာယာဉ်က ရပ်ထားသော အမျိုးသမီးနှစ်ဦးပါ ဆိုင်ကယ်ကို တိုက်မိရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကားနှင့်ချိတ်ပါသွားပြီးနောက် ရှေ့ဘီးနှင့်ကြိတ်ပြီး နောက်ဘီးကထပ်မံကြိတ်မိကာ ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် စံပြဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက် မွန်းတ
ဆီရာလီယွန် မတ် ၁ ဆီရာလီယွန်း ဒုတိယသမ္မတသည် ၎င်း၏သက်တော်စောင့်တစ်ဦး အီဘိုလာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းကိုယ်တိုင် ရောဂါမပြန့်ပွားရန် သီးသန့်ခွဲနေလျက်ရှိသည်။ ဒုတိယသမ္မတ ဆမ်မြူရယ်ဆမ်ဆူမာနားက ၂၁ ရက်တာအတွင်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မျှ ၎င်းနှင့်လာရောက် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ နေထိုင်မည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆီရာလီယွန်းတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်း အီဘိုလာဖြစ်ပွားမှု ကျဆင်းသွားသည့်အနေအထားတွေ့ရသော်လည်း ပါရီမြို့လယ်ခေါင်မှာ အရိုးစု ၂၀၀ ကျော်တွေ့ရှိ
Posted: 01 Mar 2015 03:01 PM PST
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ ရာစုက ဆေးရုံနဲ့ သင်္ချိုင်းမြေနေရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်စ်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ ကုန်တိုက် အောက်ကနေ အရိုးစုပေါင်း ၂၀၀ လောက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့တယ်လို့ ပြင်သစ် သတင်း မီဒီယာတွေမှာ စနေနေ့က ဖေါ်ပြကြပါတယ်။ ဆေးရုံကို ၁၈ ရာစုအကုန်ပိုင်းမှာ ဖြိုချခဲ့ပြီး သင်္ချိုင်းကိုတော့ နေရာရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာပါ။ Sebastopol လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ Monoprix ကုန်တိုက် မြေအောက်ခန်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ တူးေ
Posted: 01 Mar 2015 02:58 PM PST
တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုးကန့်နယ်၊ လောက်ကိုင်မြို့က ဒေသခံတွေကို လောက်ကိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့သားက မြို့တွင်းကိုပြန်လာဖို့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို လူလွှတ်ပြီး ခေါ်ယူလျက်ရှိတယ်လို့ MNDAA အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပယ်ရှောက်ချိန်ရဲ့ သား ပယ်ရင့်နိုင်က ခုလိုစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက လောက်ကိုင်မြို့တည် ငြိမ်အေးချမ်းတာကိုပြချင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ MNDAA အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးထွန်းမြတ်လင်းကြေ
Posted: 01 Mar 2015 02:23 PM PST
ကျောက်တန်း မတ် ၁ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောက်တန်းမြို့နယ် တံတားမြို့အမှတ် (၃)ရပ်ကွက် ရွှေညောင်ပင်လမ်းနေ ဒေါ်ကြည်ညွန့်(ခ) ဒေါ်တရုတ်မ (၄၇)နှစ်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က သုံးခွမြို့ကယ်ရီ ဂိတ်မှ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးငှား၍ တံတား မြို့သို့ပြန်လာရာ တံတားမြို့နှင့် ကဒပ္ပနကျေးရွာကြား အလယ်ဇရပ် အနားရောက်တွင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသဖြင့် တံတားဆေးရုံမှ တစ်ဆင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ ကုသရာ နံနက် ၁
Posted: 01 Mar 2015 12:07 PM PST
ညနေ ၅နာရီ ၀န်ကျင် တွင် ကျုံ အတွင်း လူသေအလောင်းတွေရှိ ။ ဓါတ်ပုံ (PK Phyo fb) မန္တလေး မတ် ၁ မန္တလေးမြို့(၂၆)ဘီလမ်းနှင့်(၇၅) လမ်းထောင့်အနီး၌ ယနေ့ညနေ ပိုင်းက ကျုံးရေတွင် လူသေအလောင်း တစ်လောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အလောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် လူမှုရေးအသင်းများက ဆယ်ယူပြီး မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီးသို့ ပို့ဆောင်ရာ PR အမှတ် ဝ၅ ဖြင့် လက်ခံယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသူသည် လူလတ်ပိုင်းအ
Posted: 01 Mar 2015 10:40 AM PST
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့ ထုတ် သူရိယနေ၀န်း ဂျာနယ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၄) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ Posted by